Sky Suites Luxury Condo Expo Hits K6 Billion in Sales | Myanmar Business Today
Home MMBIZ News Sky Suites Luxury Condo Expo Hits K6 Billion in Sales
Sky Suites Luxury Condo Expo Hits K6 Billion in Sales
By Tin Mg Oo/Myanmar Business Today
The sale of condominiums at Sky Suites Luxury condo exposition, organized by iMyanmar House.com on October 19-20, gathered K6.2 billion.
Q Home Construction Co., Ltd, the developer of Sky Suites, will soon hand over the condo apartments situated on nearly an acre of land to buyers. The property, which has gatheredahandful of awards from Asia Property Awards such as Best Condo Design, Best Condo Interior Design and Best Condo Development, uses only 40 percent of the land with the remaining 60 percent allocated for other facilities.
“The fully furnished Sky Suites uses branded furniture, which will please both those who love luxury and investors as it can provide lease back guarantee. It isaready-to-live property as we are handing it over soon. We are proud not only for the Sky Suites but also for the whole real estate sector, to see such strong sales,” said U Nay Min Thu, Managing Director of iMyanmarHouse.com.
The condominiums are close to Myanmar Plaza, Melia Hotel, Sedona Hotel, Myanmar International School and Inya Lake. The facilities include swimming pool, gym, sauna, tea garden, BBQ area, exercise area, yoga area,achildren’s playground, car parking, lift, 24-hour security, CCTV, and Card Access System.
“There is no one who does not like how the rooms are composed and made and the furniture we used here. iMyanmarHouse.com is our best partner.” Said U Kyi Lwin, Director of Q Home Construction Co., Ltd.
The property is located on No.23, Yanshin Street in Yankin Township, Yangon; the expo was held on location at the property. The developer offered discounts for2bedroom and3bedroom apartments.
Sky Suites Luxury ကွန်ဒိုအရောင်းပြပွဲကြီး မှကျပ် ၆ ဘီလီယံကျော် ဖိုးရောင်းချနိုင်ခဲ့
iMyanmar House.com မှ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နှင့် ၂၀ ရက်တို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် Sky Suites Luxury ကွန်ဒိုအရောင်းပြပွဲကြီးတွင် ကျပ် ၆ ဒသမ ၂ ဘီလီယံကျော်ဖိုး ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။
Sky Suites Luxury ကွန်ဒိုကို Q Home Development မှ မြေဧက (၁) ဧကနီးပါး ကျယ်ဝန်းသည့် နေရာတွင် တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး မကြာမီ အခန်းများကို အပ်နှံတော့မည် ဖြစ်သည်။ Sky Suites Luxury ကွန်ဒို စီမံကိန်းတွင် ၄၀ ရာခိုင်နှှုန်းသော မြေကိုသာ အဆောက်အအုံအတွက် အသုံးပြုထားပြီး ကျန် ၆၀ ရာခိုင်နှှုန်းကို Facilities များအတွက် အသုံးပြုထားသည်။ ယင်းစီမံကိန်းသည် Asia Property Awards မှ ချီးမြှင့်သော Best Condo Design ၊ Best Condo Interior Design ၊ Best Condo Development အစရှိသည့် ဆုပေါင်းများစွာ ရရှိထားသော ကွန်ဒိုဖြစ်သည်။
‘‘ Sky Suites ကွန်ဒိုဟာ Fully Furnished အနေအထားနဲ့ အပ်နှံပေးမှာဖြစ်ပြီး Branded တွေ သုံးပေးထားတာမို့ အကောင်းကြိုက်သူတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှပ်နှံလိုသူများအတွက် Lease Back Guarantee ပေးနိုင်တဲ့ ကွန်ဒိုဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင် အခန်းအပ်နှံတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အဆင်သင့် တက်နေရုံပါပဲ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ဝါကျွတ်ကာလ ဦးဦးဖျားဖျားမှာ ဒီလိုမျိုး ရောင်းအားကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်လည်း Skysuites ကွန်ဒိုအတွက်ရော၊ အိမ်ခြံမြေလောကတစ်ခုလုံးအတွက်ပါ ဂုဏ်ယူမိပါတယ် ’’ ဟု အရောင်း ပြပွဲစီစဉ်ကျင်းပသည့် iMyanmarHouse.com ၏ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ဦးနေမင်းသူက ပြောသည်။
Myanmar Plaza ၊ Melia Hotel ၊ Sedona Hotel ၊ Myanmar International School ၊ Inya Lake တို့ အနီးတွင် တည်ရှိသော ကွန်ဒိုသည် Facilities များ အနေဖြင့် Swimming Pool ၊ Gym ၊ Sauna ၊ Tea Garden ၊ BBQ Area ၊ Exercise Area ၊ Yoga Area ၊ Bar Area ၊ Children Play Ground ၊ Car Parking ၊ Lift ၊ ၂၄ နာရီလုံခြုံရေး နှင့် CCTV ၊ Card Access System စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
” ဒီကွန်ဒိုကို ရောက်လာတဲ့လူတိုင်း အခန်းဖွဲ့တွေ ၊ အဆောက်အဦလက်ရာတွေ ၊ သုံးထားပေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို မကြိုက်တဲ့သူ မရှိပါဘူး။ iMyanmarHouse.com နဲ့ ရောင်းတဲ့ အရောင်းပွဲတိုင်းမှာ ကျေနပ်အားရမှုရှိအောင်ရောင်းပေးနိုင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး Partner ပါ ” ဟု Q Home Development ၏ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးကြည်လွင်က ပြောသည်။
အဆိုပါကွန်ဒို အရောင်းပြပွဲကြီးကို စီမံကိန်းတည်ရှိရာ အမှတ် ၂၃ ရန်ရှင်းလမ်း ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ပြပွဲအတွင်း2Bedroom နှင့်3Bedroom အခန်းအမျိုးအစားများကို အထူးDiscount များဖြင့် ရောင်းချပေးခဲ့သည်။
Previous articleCarsDB Auto Show to Provide One Stop Service
Next articleMyanmar and Thailand Agree to Use Kyat and Baht for Cross-Border Payments